Brousia Dortmound oo xiiso ba'an u qabta Andre Onana.
Home Horyaalka Germalka Brousia Dortmound oo xiiso ba’an u qabta Andre Onana.
Brousia Dortmound oo xiiso ba’an u qabta Andre Onana.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa miisaamaysa u dhaqaaqista goolhayaha Ajax Andre Onana iyagoo raadinaya inay helaan bedel ku habboon Roman Burki.
Mustaqbalka Onana wuxuu ahaa mid isha lagu wadahayey 12-kii bilood ee la soo dhaafay iyadoo kooxo badan oo reer Yurub ah lagu xamanayo inay la socdaan wax qabadkiisa.
Chelsea iyo Tottenham ayaa labadaba loo aqoonsaday inay xiiseynayaan 24-sano jirkaan in kasta oo dalabyadooda aysan ku guuleysan kooxaha ka dhisan Premier League.
Sanadkii la soo dhaafay xiddiga heerka caalami ee dalka Cameroon wax sir ah kama uusan qabin damaciisa ah inuu ka sii gudbo Ajax – isagoo u dhaqaaqay Barcelona mar ay u muuqatay inay macquul tahay – laakiin iyadoo cudurka faafa ee coronavirus uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha kooxaha kubada cagta adduunka, Onana waxaa lagu qasbay inuu kusii nagaado Eredivisie.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo heshiiska Onana uu haatan dhacayo 18 bilood ka dib, Ajax ayaa doonaysa inay la shaqeeyaan koox kasta oo raadineysa inay miiska soo saaraan tartan ay u qabaan onana waxaana ay si fiican uga heli karaan dalabkaas kooxda Borussia Dortmund.
Lambarka koowaad ee kooxda Burki waxaa soo weriyey BILD ‘inuusan ka soo bixin wixii laga filaayay’ kooxda ka ciyaarta Bundesliga, iyadoo Onana uu ka midyahay magacyo dhowr ah oo ku jira liiska kuwa badali kara.
Goolhayaha RB Leipzig’s Peter Gulacsi iyo Benfica goolhayaheeda Odisseas Vlachodimos ayaa sidoo kale lala xiriirinayey kooxda Dortmund, iyadoo qodobka hore ee lagu sii daayay uu yahay 15 milyan ee euro uu ka dhigayo inuu yahay xulashada ugu jaban.
Previous articleJurgen Klopp oo ka warbixiyay xaalada dhaawac ee Sadio Mane
Next articleMaxaa ka jira in Madaxweynaha kooxda Real madrid laga helay covid 19